Ungayihambela kanjani i-Saudi Arabia isuka e-UAE, eNingizimu Afrika, e-Argentina futhi?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Saudi Arabia Breaking News » Ungayihambela kanjani i-Saudi Arabia isuka e-UAE, eNingizimu Afrika, e-Argentina futhi?
Airport • I-Argentina Breaking News • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ukuphepha • I-Saudi Arabia Breaking News • INingizimu Afrika Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UAE Breaking • Izindaba Ezihlukahlukene
ISaudi iphakamisa ukuvinjelwa kokuhamba
Umbuso owawusuvaliwe futhi ongaqondakali waseSaudi Arabia manje usuyaziwa njengezwe elinobungani kakhulu kwezokuvakasha emhlabeni.
Izwe lihamba phambili ebuholini bezokuvakasha emhlabeni.
Namuhla uMnyango Wezangaphakathi waseSaudi ukuqinisekisile ukuthi uzovula kabusha uMbuso kumakhelwane wawo, i-United Arab Emirates, eNingizimu Afrika nase-Argentina.
Ukuhamba kuzophinde kuvunyelwe phakathi kwe-Kingdom of Saudi Arabia ne-United Arab Emirates, South Africa, ne-Argentina kusukela ngoLwesithathu, ngo-Septhemba 8. La mazwe asanda kususwa ohlwini olubomvu lohambo loMbuso.
Isinqumo sokususa ukuvinjelwa kokuhamba sisuselwa ekuhlolweni kwesimo esikhona se-COVID-19 eMbusweni, kuchaza uMnyango.
UMnyango Wezangaphakathi wathi indlela yokumisa ukutheleleka kwe-COVID-19 ukusabalala ukushuba ukuqhubeka nokusebenzisa izindlela zokuzivikela, njengokugqoka izifihla-buso, ukuqhela emphakathini nokuhlanza indle.
Kusukela namhlanje, ngoLwesibili, ngoSepthemba 7, 2021, bekunamacala amasha ayi-138 we-COVID-19 kwathi abanye abantu abangu-6 babulawa yi-coronavirus. Kuze kube manje, kubikwe amacala angama-545,505 kanti sekushone abantu abangu-8,591.
Lokho okwenziwa uMbuso manje
Njengamanje, iSaudi Arabia iphokophela umkhankaso wokugoma ukufeza ukuzivikela komhlambi wama-70% wabantu abagonywe ngokuphelele. Kuze kube manje, izwe selithole ama-45% okutheleleke ngokuphelele futhi ama-63% asethole umthamo wokuqala. Uhulumeni ulindele ukufinyelela ekuvikeleni umhlambi ngasekuqaleni kukaNovemba.
Ngaphandle kohlelo lwayo lokugoma, izwe selisungule izindawo zokuhlola nezikhungo zokwelashwa, lisiza amakhulu ezinkulungwane zabantu.
Inyanga nohhafu nje edlule
Ekupheleni kukaJulayi 2021, iSaudi Arabia yayisibekele ukuvinjelwa kokuhamba kweminyaka emithathu kwezakhamizi zayo uma bephula umthetho obekiwe futhi beya kunoma yiliphi lamazwe “ohlwini olubomvu” loMbuso. Ngaphezu kokuvinjelwa kweminyaka emithathu, kuzobekwa izinhlawulo ezinzima lapho kubuyiswa.
Kuleli hlu lokuvinjelwa kohambo bekukhona amazwe azophakanyiswa kusasa - i-UAE, iNingizimu Afrika ne-Argentina.
Yini edingekayo ukuya eSaudi Arabia?
Kusukela ngo-Agasti 1, 2021, ISaudi ivulekele ukugoma izivakashi zomhlaba wonke ukuhamba nge-visa yezokuvakasha. Abahambi kuzodingeka futhi babe nomshuwalense we-COVID-19 ngenkathi beseMbusweni. Izindleko zalo mshuwalense zizofakwa emalini ekhokhwa nge-visa yabavakashi. Ukuhlola ukufaneleka kwezwe kuhlelo lwe-eVisa ngokuhlola ukufakwa kuhlu ku- Ikhasi leVisaSaudi. Wonke amazwe angabhalisiwe angafaka isicelo se-visa yezokuvakasha enxusa ngeNxusa LaseSaudi Arabia eliseduze nge-www.mofa.gov.sa
Zonke izivakashi ezifika ezweni ezine-visa evumelekile yezokuvakasha kufanele zinikeze ubufakazi benkambiso ephelele yomuthi wokugoma oyi-4 owaziwayo njengamanje: imithamo emi-2 yemithi yokugoma i-Oxford / Astra Zeneca, Pfizer / BioNTech noma iModerna, noma umthamo owodwa womuthi wokugoma okhiqiziwe nguJohnson noJohnson.
Izivakashi eziqede imithamo emibili yemithi yokugoma iSinopharm noma iSinovac zizokwamukelwa uma zithole umthamo owengeziwe womunye wemithi yokugoma emine evunyelwe eMbusweni.
ISaudi Arabia iye wavula ingosi yewebhu ukuze izivakashi zibhalise isimo sazo sokugoma. Isiza sitholakala ngesi-Arabhu nangesiNgisi.
Abahambi abafika eSaudi Arabia nabo kudingeka ukuthi bahlinzeke nge-PCR test engathathwanga ngaphezu kwamahora angama-72 ngaphambi kokuhamba kanye nesitifiketi esivunyelwe sokugoma iphepha, esiqinisekiswe yiziphathimandla zezempilo ezisemthethweni ezweni elikhiphayo.
Asikho isidingo sokuhlukaniswa kwabahambi abagonyelwe eSaudi.
Bonke abahambi abangena ku-visa ekhishwe ngaphambilini yezokuvakasha kuzodingeka ukuthi bakhokhe imali eyengeziwe ye-SAR 40 esikhumulweni sezindiza lapho befika khona ukukhokhela umshuwalense nganoma yiziphi izindleko zezokwelapha ezihlobene ne-COVID-19.
Abahambi bayelulekwa ukuba babheke izidingo zamanje zokungena nenkampani yezindiza abayikhethile ngaphambi kokuthenga ithikithi.
Ngubani osekhona "ohlwini olubomvu?"
Ukuthatha amazwe amathathu azosuswa ohlwini kusasa, la mazwe alandelayo ahluleka okwesikhashana ukuya eMbusweni:
Ukuze uthole olunye ulwazi, xhumana usizo.visitsaudi.com.